‘दपर्ण छायाँ २’को ब्यवसाहिक सुरुवाद सुखद रहन सकेन – निर्देशक घिमिरे-CineHotline.com
‘दपर्ण छायाँ २’को ब्यवसाहिक सुरुवाद सुखद रहन सकेन – निर्देशक घिमिरे
निर्देशक तुलसी घिमिरे नेपाली चलचित्र क्षेत्रले बिर्सन नहुने नाम हो । यस क्षेत्रमा थुपै्र ब्यवसाहिक चलचित्र दिएका घिमिरेले कयौ कलाकार चलचित्र मार्फत जन्माएका पनि छन् । चिनो, मितज्यु, लाहुरे जस्ता कालजयसी चलचित्र बनाएका घिमिरे निर्देशित ‘दर्पण छाँया’ पछिल्लो सुपरहिट चलचित्र हो । थोरै लगानीमा बनेको यो चलचित्रले कयौ रेकर्ड बनाएको थियो । यसै चलचित्रको सिक्वेलको रुपमा घिमिरेले अहिले ‘दपर्ण छाँया–२’ बनाएका छन् । जुन चलचित्र गत शुक्रबारबाट देशभर सार्वजनिक प्रदर्शनमा समेत आएको छ । सुपरहित चलचित्रको सिक्वेल भएपनि यसको क्रेज भने दर्शक त्यति देखिएको छैन । प्रस्तुत छ ‘दपर्ण छाँया –२’को बिषयमा निर्देशक घिमिरेसँग गरिएको छोटो कुराकानी ।
‘दपर्ण छायाँ २’को ब्यवसाहिक सुरुवाद सुखद रहन सकेन किन ?
– चलचित्र चलेकै दिन अर्थात शुक्रबार र शनिबार बन्द, बर्षा लगायत बिभिन्न कारणले ब्यवसाय राम्रो हुन सकेन । तर आइतबारबाट केही सुध्रिएको छ । आज सोमबार झनै राम्रो देखिएको छ । चलचित्रले बिस्तारै पिकअप लिन्छ भन्ने बिस्वस छ मलाई ।
कस्ता बर्गका दर्शक चलचित्र भवनमा देखिएका छन् ?
– चलचित्रको प्रदर्शन पछि म जति सिनेमाघरमा पुगेको छु । त्यसको आधारमा भन्ने हो भने मेरो चलचित्र हेर्ने धेरै दर्शक टिन एजर्स नै छन् । त्यसो त अन्य बर्गका दर्शक नभएका पनि होइनन् । बर्ग जे भएपनि चलचित्र मन परेको सबैले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सिक्वेल आउँदा जतिको हुइम चल्नु पर्ने हो । त्यो चलेको छैन नि । प्रचारमा चुक्नु भएको हो ?
– कसरी के गर्दा हुइम चल्छ । त्यो आइडिया मलाई भएन । सकेजति र जाने जति प्रचार गरेको छु । एउटा कुरो के हो भने चलचित्रको ट्रेलर र गीत छोेड्न केही ढिलाई भएछ । चलचित्रले बिस्तारै पिकअप लिन्छ । मेरो चलचित्रले अहिलेसम्म इनिसियल हानेकै छैन । चल्दै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै पिकअप लिने हो ।
‘दपर्ण छाँया’को ब्यवसाय दोस्रो साताबाट उकासिएको थियो । यो चलचित्र पनि त्यस्तै हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
– त्यस्तो हैन । चलचित्र चलेको दिन र दोस्रो दिन बिभिन्न कारणले राम्रो हुन सकेन । तेस्रो दिनबाट चलचित्र भवनमा दर्शक देखिएका छन् । अब चलचित्रले बिस्तारै पिकअप लिन्छ, दर्शक बढ्छन् भन्न मात्र खोजेको हुँ ।
दर्शकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
– पोजेटिभ प्रतिक्रिया पाएको छु । केही पत्रकार भाइले चलचित्र नै नहेरी उल्टासुल्टा लेख्नु भएको छ । ति बाहेको धेरैको राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । राम्रो नराम्रो जे लाग्छ । चलचित्र हेरेर लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
समय अनुसार अपग्रेट हुनसक्नु भएन भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो समयले देखाउँछ । मैले भन्ने हो भने चलचित्र क्षेत्रका कोही पनि अबग्रेट भएको देखेको छैन । त्यही ब्याक्तिले बनाएमको चलचित्र राम्रो भयो भने अपग्रेट भयो भन्छन् । चलचित्र ओरालो लाग्यो भने अपग्रेट भएन भन्छन् । मेरो बिचार चलचित्र क्षेत्रमा कोही पनि अपग्रेट छैनन् ।
नयाँ कलाकारको बलमा लगानी गर्नु कतिको जोखिम रहेछ ?
–जोखिम छ र हुन्छ । जोखिम जो कोहीले पनि मोल्न सक्दैन । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोखिम मोल्ने एक दुई जना निर्देशक छन् । ति मध्यको एक म पनि हुँ । म जोखिम र रिक्स मोल्न कहिलै पनि पछि नहट्ने टाइपको निर्देशक हुँ ।
सिक्वेल नराम्रो बन्ला भनेर खबरदारी कतिको पाउनु भयो ?
धेरै पाए । धेरैले यो चलचित्र पहिलेको जस्तो हुन्छ र । नराम्रो भए घाटा हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा बारम्बार गर्थे । मैले यसमा कथा फरक छ । कलाकार फरक छन् । नाम मात्र सिक्वेल हो भनेर बुझाउदै आएको छु ।
चलचित्र बनाउन भन्दा पनि चलाउन गाहे हो ?
हुन त हो । तर म पुरानो मेकर भएकाले होला । मलाई बितरक आफैले दौडधुम गरेर सजिलो बनाइ दिएका छन् ।
दर्शकलाई केही भन्नु छ कि ?
–मैले अहिलेसम्म दर्शक लागि भनेर चलचित्र बनाएको छु । दर्शको सन्तुष्टी नै मेरो सन्टुष्टी हो । मैले धेरै बिचार गरेर मिहनत गरेर यो चलचित्र बनाएको हुँ । पोजेटिभ थिमले चलचित्र बनाएको छु । हेरेर राम्रो नराम्रो के लाग्छ । प्रतिक्रिया दिनु होला । प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा अगाडि बढ्न मलाई मद्दत पुग्छ ।
Give Your Opinion On "‘दपर्ण छायाँ २’को ब्यवसाहिक सुरुवाद सुखद रहन सकेन – निर्देशक घिमिरे"